तिथि मेरो पत्रु »5पागल (तर साँचो) तपाईं डेटिंग बारे कुराहरू थाह पाउनुपर्छ!
द्वारा लिसा Reynolds
5 पागल (तर साँचो) तपाईं डेटिंग बारे कुराहरू थाह पाउनुपर्छ!
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Nov. 27 2020 |2मिनेट पढ्न
तपाईं केही अनुसन्धान गर्न र कुरा बाहिर फेला यो साँच्चै रोचक हुन सक्छ तपाईं डेटिङ को यस संसारको थाह कहिल्यै. अरूलाई लड्दै वा बस रोचक पनि गर्न सकिन्छ, जबकि तपाईं आफ्नो कारण मदत गर्न सक्छ पढ्न केहि तथ्य घर कुञ्जी वा विवाह निमन्त्रणा प्राप्त गर्न. विराजिये, आनन्द र यी पाँच डेटिङ तथ्यहरू आश्चर्यचकित हुन!
कार्यस्थल रोमान्स दिन पार सिर्फ एक बाटो छैन हुनुहुन्छ!
कार्यस्थल सम्बन्ध मा मूलका सम्बन्ध आश्चर्यजनक बारेमा संग एक धेरै उच्च सफलता दर छ 40% बरु प्रत्येक अरूलाई बाँच्न मानिसहरूको धेरै भएको को अर्थमा अचम्मको छ जो विवाह मा अन्त्य काम रोमान्स को’ यसरी पकेट मा हाल्छ तर एकै समयमा यो पूर्णतया अचम्मको कुरा होइन. तपाईं शायद तिमी के प्रेम. शायद उनीहरूले पनि त तपाईं पहिले नै प्रत्येक अन्य केही कुरा समान छ र तपाईं दुवै पक्षहरु मा एक आकर्षण हो भने यो शायद प्रेम मा बढ्नेछ वहाँ एक राम्रो मौका हो भनी सँगै धेरै समय खर्च.
बनाउन-अप मदत गर्छ!
विगतमा टीएलसी र Chemistry.com तथ्याङ्क त्यो लगाएका छ भने एक पल्ट मा एक महिला बढी छिटो छ मिनेट को एक औसत माथि गर्थें हुनेछ भन्ने देखाएका छन् बनाउन-अप. कसैले कसैलाई fancies र तिनीहरूले एक बिट अगाडी छन् वा तिनीहरूले जसरी तपाईं माथि च्याट chatty तर यदि म भन्दा भाग को लागि सोच्न म यो मदत गर्न सक्छन् भनेर यसो मा. तपाईं blemishes ढाकछोप र विश्व मा आफ्नो तयार महसुस गर्न सक्छन्. यो भनेर विश्वस्त छ वा आफ्नो स्पट देखाउन छैन भन्ने तथ्यलाई तपाईंले चाहेको व्यक्ति बहस गर्न खुला छ तपाईं हुन्छ चाहे!
एबीसी भन्दा साधारण यौन कल्पना मा बाहिर सेक्स भएको छ कि रिपोर्ट 57% जबकि 14% एक त्रिगुट गरेको छ र 21% तिनीहरूलाई को यो विचार छ. एक पाँचौं भन्दा कम तिनीहरूले आफ्नो साथी छल्न खोजेको छ भने, तर तिनीहरूलाई एक तिहाइ बारेमा जाँचमा चोर्ने बारेमा fantasized छन्. बस अमेरिका को आधा तिनीहरूले खुला छन् भनेर भन्न र आफ्नो साझेदार यी कल्पनामा छलफल. म यो यति धेरै यौन सम्बन्ध राख्न उत्तेजित के आफ्ना साझेदार खुला भएको हो कि ठूलो छ विचार तर म तिनीहरूले शायद फिर्ता राख्नुपर्छ लाग््छ “म तपाईं प्यारी चोरेर बारेमा fantasized।” लाइन!
तीन भीड छैन!
कसैले सँगै खडा दुई मित्रहरुलाई छन् भने एक सामाजिक घटना मा एक कुराकानी थाल्न गाह्रो पाता र तिनीहरूले एक आकर्षित हुन्छन्. तिनीहरूले अन्य मित्र आफ्नो मित्र त्यागेको महसुस गर्न चाहँदैनन्. तपाईं पाउन देख रहे भने त्यो विशेष कसैले साथ दुई मित्रहरुलाई ल्याउन!
न्यूयोर्क र वासिङ्टन अविवाहित हो जो सबै भन्दा राज्य बासिन्दाको छ. पहिलेका छ 50% र पछिल्लो छ 70% यति प्रभावित न्यूयोर्क र वासिङ्टन गर्न मा प्राप्त! उच्च विवाह प्रतिशत संग राज्य को मामला मा Idaho र यूटा मा छ 60% र 59%.
कुकुर संग हिड: तपाईंको पिल्ला बिर्संदै तपाईंको Soulmate डोऱ्याऊन्
Yappily कहिल्यै पछि: के तपाईं 'मिश्रित परिवार' लागि तयार हुनुहुन्छ?
7 सेक्स बारे मिथ्या
Spotting नक्कली अनलाइन Daters तत्काल घायलश्री गाइड
कसरी अनलाइन डेटिङ धक्का प्राप्त गर्न